Ndege kubva kuAddis Ababa kuenda kuMogadishu dzatangazve ne Star Alliance Carrier
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege kubva kuAddis Ababa kuenda kuMogadishu dzatangazve ne Star Alliance Carrier
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Ethiopia Kupwanya Nhau • Investments • nhau • Somalia Kuvhuna Nhau • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Addis Ababa neMogadishu vachange vachibatanidza Ethiopia neSomalia zvakare muna Mbudzi neStar Alliance Carrier Ethiopian Airlines.
Nezve kutangazve kwendege dzeMogadishu, VaTewolde Gebremariam, Group CEO weEthiopian Airlines, vakati: “Zvinotipa mufaro mukuru kumutsirazve ndege kuMogadishu, guta guru reSomalia mushure mekumisa sevhisi makore makumi mana apfuura. Ndinoshuvira kuratidza kutenda kwangu kuHurumende dzeEthiopia neSomalia nekuita kuti kumisikidzwa kwendege idzi kuitike.
Ndege dzichaita basa rakakosha mukusimbisa vanhu-kune-vanhu uye hukama hwehupfumi pakati penyika mbiri dzakavakidzana nehanzvadzi. Ndege idzi zvakare dzinogonesa akakosha eSomalia Diaspora muAmerica, Europe, Asia, Middle East, Europe ne Africa kuti vaende kumusha kwavo kuburikidza neAddis Ababa nekuda kwenzvimbo yedu yepasi rese yenzvimbo dzinopfuura zana nemakumi matanhatu nenhatu dzenyika.
Ndege dzedu dzichakurumidza kukura kuva nendege dzezuva nezuva dzakapihwa huwandu hwakawanda hwemotokari pakati penyika mbiri idzi uye nemugwagwa wakakura pakati peSomalia nepasi rose. ”
Kutanga kweshumiro kuSomalia kwakauya makore makumi mana nemana mushure mekumiswa kweEthiopian Airlines Group nenzira yayo kuenda kuMogadishu muma41.